China American dhizaini yebhokisi shanduri Kugadzira uye Fekitori | Fuda
Main basa uye maficha
Diki vhoriyamu, compact diki, yakavimbika magetsi inopa uye nyore kuisirwa; inogona kuona imwechete magetsi, magetsi maviri, kana mhete mambure, ine mbiri-fiyuzi dziviriro, yakaderera Kumhanya mutengo.
Iyo casing pamusoro inorapwa neye electrostatic kupenda uye ine yakanaka yekupfeka kuramba. Inoshanda kune ese mhete mambure uye imwe / mbiri magetsi magetsi, iri nyore kuchinja, uye inogona kusimudzira kuvimbika kwemagetsi. Iyo inoshandura inotora nharaunda-inoshamwaridzika S11 dzakateedzana zononoka musimboti, isiri-inonakidza magetsi mutemo, izere-yakavharirwa mhando, iine simba rekuchengetedza uye ruzha ruzha. Iyo amorphous alloy transformer inowanikwawo kana zvichidikanwa nevatengi. HV mutoro switch uye inodzivirira fuse inoiswa mumafuta akazadza tangi tangi, uye iyo tangi ine yakazara-yakavharirwa chimiro. Imba yeLV inopihwa mawt-awa mamita, voltmeters, uye mabhureki emitsara mina inobuda, simba remagetsi rinoshanda rinogona kupihwa kana zvichidikanwa.
Iyo inoshandisa S11 dzakateedzana zononoka musimboti shanduri, kurasikirwa kwayo kwekuita kuri 30% ~ 40% pasi pane S9, uye ruzha 7-10dB pasi pane S9
Pamusoro pekuchengetedza zvigadzirwa zvangu (American box transformer)
Mushure mekumisikidzwa uye kushandiswa kweAmerican bhokisi shanduko, hazvo hapana chikonzero chekuchengetedza, asi zvigadzirwa zvemumba zvinogadzirwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana, basa rekuchengetedza bhokisi reshanduro rinokosha.
Nekuda kwematambudziko epamusoro ekurapwa kwetekinoroji, kuongorora kwechitunha kunofanira kusimbiswa.
Mafuta akazadzwa mutangi yemafuta kazhinji FR3 kuputira oiri, nzvimbo yayo yekupisa inogona kusvika pa312 ℃, uye ine yakanakisa magetsi magetsi, kwakasimba kuputira simba, lubrication yakanaka, yakasimba arc kudzimisa kugona, isiri-chepfu, inogona kuve kuora kwehupenyu, nekudaro kudzikisira. kukanganisa kune zvakatipoteredza uye hutano. Iyo FR3 inodzivirira mafuta haina kuumba sediment seyakajairwa emaminerari mafuta, nepo mazhinji eanochengetwa eAmerican bhokisi shanduko akazadzwa ne25 # akajairwa mamineral mafuta. Uye zvakare, iyo yepamusoro tangi tangi inowanzo zadzwa neinert gasi kudzivirira mweya kubva kuchinjana mvura kupinda mumafuta. Nekudaro, iyo yekumba American bhokisi shanduko inogona kunge isina iri basa. Kwenguva yakareba, mashandiro emafuta acho achadzikiswa, uye kuiswa kwayo kwekusimbisa ishoma pane kuzadzisa zvinodiwa ne7 Psig, saka mafuta anofanirwa kuchinjwa nguva dzose.
Bhokisi reAmerican rinove risina mafuta ekudzivirira tembiricha, imwe chete thermometer kuratidza tembiricha yemafuta, kana tembiricha yemafuta yakanyanya kukwirira, vimba nefuse-plug fuse yekudzivirira, uye vharuvhu yekumanikidza yekuburitsa yakawandisa kumanikidza mutangi. Naizvozvo, zvinofanirwa kuve zvakakosha kutarisa kuti fiyuzi inoshanda zvakajairika uye leakage yemafuta muzviitiko zvese izvi.
Nekuti tanki rerangi rakafumurwa nekunze, kuongororwa kunofanirwa kuitiswa nguva dzose kudzivirira mafuta kubuda.
Pashure: Maitiro eEuropean ebhokisi shanduri
Zvadaro: Distribution Bhokisi KYN28A-12
Cable Distribution Bhokisi
Magetsi Distribution Bhokisi
Simba Distribution Bhokisi